नेकपा गुल्मीद्धारा शोक सभा सम्पन्न | Buddhavumi News
नेकपा गुल्मीद्धारा शोक सभा सम्पन्न
ताजा खबर बिशेष
१६ फाल्गुन २०७५ १८:१३ February 28, 2019 buddha vumiLeaveaComment on नेकपा गुल्मीद्धारा शोक सभा सम्पन्न
१६ फागुन, गुल्मी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गुल्मीले श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ । बुधवार ताप्लेजुङमा नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री एबं नेकपाका प्रभावशाली नेता रबिन्द्र अधिकारीको हेलीकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु थियो ।
बिहिवार नेकपा गुल्मीले मदनआश्रीत पार्टी कार्यालय तम्घासमा श्रद्धाञ्जली सभा गरेको हो । श्रद्धाञ्जली सभामा नेकपा गुल्मीका जिल्ला स्तरिय नेताहरुले देशले एक कर्मठ ब्यक्ति गुमाउनु पर्दा अपुरणीय क्षती भएको बताएका थिए ।
श्रद्धाञ्जलीमा नेकपा गुल्मीका जिल्ला स्थित नेता, तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता हरेको थियो । मन्त्री अधिकारीको निधनमा पार्टी कार्यालयमा रहेको झण्डा आधा झण्डा झुकाउने र आजबाट तीन दिनसम्म पार्टीका कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरु नगर्ने नेकपा गुल्मीले जनाएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा फोटो सहित शोक पुस्तिका राखिनेछ र शोक सभाहरु गरिने नेकपा गुल्मी जिल्ला कार्यदल सदस्य बालसिंह काउछा, र सदस्य बुद्धि जिसीद्धारा हस्ताक्षरित शोक बकतव्यमा उल्लेख छ । नेकपा गुल्मीले मातहतका कमिटीलाई सोहि अनुसार कार्य गर्न सकुर्लर समेत जारि गरेको छ ।
दाङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, ५ जना घाइते
आशा अपांगलाई गुल्मी जिल्ला समाज यूकेले ४ लाख सहयोग
सरकारले काम गरेन भन्नु अन्याय हो ः मन्त्री विष्ट
११ फाल्गुन २०७५ २०:३१ February 23, 2019 buddha vumi
गुल्मी महोत्सवमा खादा र ब्याच प्रयोगमा निषेध गरिने
५ चैत्र २०७५ १९:१८ March 19, 2019 buddha vumi
दाइजो नल्याएको आरोपमा परिवारका सदस्यद्वारा चरम यातना, आरोपितहरू गिरफ्तार
१३ आश्विन २०७५ २३:२० September 29, 2018 buddha vumi
रिमाल राज्यः सिंहदरबारका ‘छाया शासक’, जसको सरकारदेखि प्रशासनसम्म दबदबा छ
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीदिनअघि [पुरा पढ्नुहोस]
मन्त्रिपरिषद बैठक : निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा खरेल नियुक्त
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सरकारले मदन [पुरा पढ्नुहोस]
एस्.ई.ई. परिक्षामा रेसुगां मा.वि. देशभरमै दोस्रो, ¥यार्लीसहित मनायो खुसि
हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी २९ भदौ । जिल्लाको रेसुगां [पुरा पढ्नुहोस]
गुल्मेली दुई बरिष्ठ सहित्यकार सम्मानित, को हुन सूब सेन ?, मुमुक्छु को हुन ?
गुल्मी– वरिष्ठ साहित्यकार सूब सेन र काठमाण्डौ [पुरा पढ्नुहोस]
गुल्मीमा प्रदेश सरकारका तिनवटा डिभिजन कार्यालय
गुल्मी । भदौ १५, राज्यको पुनःसम्रचना गर्ने क्रममा सडक [पुरा पढ्नुहोस]